Fitaratra eto amin’ny firenena ny kaominina Mahajanga. | Région Boeny
Ao anatin’ny fitoniana no hampisiana fampandrosoana fototra sy hanarenana ny toe-karena ary hanafoanana ny delestazy ao anatnin’ny 50 taona ho avy eto amin’ny tany sy ny fanjakana.
“Tsy maintsy voahavaha izay sakana ho amin’ny fampandrosoana mba hanatrarana ny fanamby ary mila faharetana ny tsirairay” hoy ny Filoham-pirenena Atoa Hery Rajaonarimampianina nandritry ny fandalovany teto Mahajanga ny latsinainy 27 febroary 2017.
Nanolotra fitaovana sy kojakoja ampiasaina ao aomin’ny hopitaly sy ao amin’ny biraon’ny mpitsabo ny tenany sy ireo Ministra niaraka aminy tao amin’ny hopitaly PZaGa Androva Mahajanga. Nanararaotra nitsidika ireo marary mitsabo tena ao amin’ny complexe mère et enfant Androva ihany koa ny tenany nandritra ny fandalovany.
Ny tananan’ny Mahajanga dia hatao fitaratra eto amin’ny firenena ary izany no antony hananganana ny toeram-pamokarana angovo azo avaozina avy amin’ny alalan’ny masoandro. Mba ho fampandrosoana ny tanànan’ny Mahajanga ary dia namboarin’ny fitondram-panjakana ankehitriny ny lalana mampitohy an’i Mahajanga sy Antananarivo ary ny faritra maro hafa eto Madagasikara.
Namboarina toy izany koa ny lalana anatiny tanana izay mirefy 3,700 kilometatra izay mampitohy an’Ambondrona sy ny oniversite, Tsararano ambany sy ny fokotanin’ Ambalavola mankany amin’i Jardin Caylla. Tsy hijaonona hatreo fa mbola hitohy amin’ny fanamboarana ny lalana mankany amin’ny Petit Plage sy Grand Pavois ny fanorenana fotodrafitr’asa eto Mahajanga araka ny nambaran’I Filoham-pirenena.
Notsidihana tamin’io andron’ny alatsinainy 27 febroary io ihany koa ireo mpiavarotra vary tao amin’ny tsenan’ny Tsararano ary nanome baiko azy ireo ny hampidinana ny vidim-bary na ny nafarina na ny vary gasy.
Mbola tamin’io andro io ihany koa no nankalazaina teto Mahajanga ny faha 50 taona ny fanjonoana makamba. Misy araka izany ny fampirantiana ho fampahafantarana mikasika ny sehatr’asa jono sy ny vokatra makamba ary ny fanondranana azy any ivelany. Ny Ministera sy ny foibem-paritry ny harena anaty rano sy ny jono teto Mahajanga moa no nikarakara izay.